Itoophiyaa: 'Humni kamiyyu ijaarsa hidha haaromsaa dhaabsisuu hin danda'u'- Zooniin Waraana Lixaa - BBC News Afaan Oromoo
Itti aanaan Zoonii Waraana Lixaa Birgeeder Jeneraal Tasfaayee Tamasgeen.
Humni kamiyyuu ijaarsa hidha haaromsaa Itoophiyaa dhaabsisuu hin danda'u, jedhe Zooniin Waraana gama Lixa.
Ijaarsi hidha haaromsaa guddichi rakkoo nageenyaa tokko malee saffisaan akka hojjetamuuf kallattii hundaan hojjechaa akka jiru itti-aanaan Zoonii Waraana Lixaa Birgeeder Jeneraal Tasfaayee Tamasgeen himan.
Jeneraal Tasfaayeen kana kan dubbatan loltoota rakkoon nageenyaa akka hin uumamneef naannoo hidha haaromsaatti bobba'uun hojjechaa jiran yeroo daawwatanittidha.
Hidhi guddichi akka biyyaatti xiyyeeffannoo guddaan kan itti kennameefi uummatni keenyas xumura isaa eegaa jiru yoo tahu, loltootni keenyas dammaqinaan eegaa jiru jedhan.
Hojii nageenya eegsisuu kana caalaa cimsuuf akka hojjechaa jiranis himaniru. Sadarkaa hidhichi irra gahe ilaaluun loltoota eegumsa irratti bobba'aniifis akka humna dabalataa taheera jedhan Birgeeder Jeneraal Tasfaayeen.
FBC'n akka gabaasetti Birgeeder Jeneraal Tasfayeen humni kamiyyuu hojii hidha haaromsaa kana dhaabsisuu hin danda'u jedhanii loltootnis imaanaa itti kenname irratti yeroo 7ffaaf miindaa isaaniirraa boondii akka bitanii akka deeggarsa godhan himan.
Itoophiyaa, Masiriii fi Sudaan maal irratti walii galuu dadhaban?
Itoophiyaan yeroo gannaa kanatti bishaan kuusuu akka eegaltu ibsiteetti. Bara 2013 keessa ammoo tarbaayineroota muraasaan ibsaa maddisiisuu ni jalqaba jedhama.
Tibbana MM Abiy Ahimed hidha haaromsaa ilaalchisuun erga aangootti dhufanii as haalli mariin biyyoota akka Masirii fi Sudaan waliin guutumsa bishaaniifi kaan irratti gaggeeffamaa ture bifa jijjirachuu himanii ture.
Diinni nu weeraruu barbaadu jira jechuun dabalataan jecha 'Banda' jedhu fayyadamuun qaamni siyaasa biyyaa keessatti hirmaatu diina waliin wal tumsuun biyya keenya jeequuf hojjetu jira jedhanii ture.
Biyya akka sodaatti ilaalamtu garuu hin ibsine. Dabalataan siyaasa biyyaa keessatti qaama hirmaata jedhan keessaas qaama kamtu kan isaan diina jedhan kana waliin hojjechaa aaka jiru ifatti wanti dubbatan hin jiru.
Gidduugalummaa Ameerikaan Itoophiyaa, Masiriifi Sudaan dhimma hidha haaromsaa irratti mari'achaa turanis waliigaltee xumuraa irra osoo hin gahiin turaniiru.
Diinni Itoophiyaa weerartu kami?
Itoophiyaaf yaaddoo nageenyaa biyyi tahuu dandeessu kami kan jedhu irratti barataa digirii 3ffaa 'Peace and security' yuunvarsiitii Finfinnee kan tahe Kumaa Baqqalaa hidha Abbayyaa waliin wal qabatee Masiriin yaaddoo tahuu malti jedhe.
Itoophiyaan osoo waliigaltee xumuraa irra hin gahiin guutinsa bishaanii hidha Abayyaa irratti jalqabuuf waan jettuuf kun Masiriif yaaddodha jedha.
Kanaan wal qabatee haala siyaasaa biyya keessaa amma deemaa jiru akka carraattii fayyadamuun dhimma Itoophiyaa keessa harka galfachuu dandeessi jedhe.
Haalli siyaasa biyyaa tasgabbii dhabaa kan deemu yoo tahe ammoo Masirii qofa osoo hin taane biyyootni Itoophiyaa irraa fedhii xixiqaa qabanis dhimma biyyaa keessa galuu akka hin hafne ibsa.
Kumaan dubbii MM Abiy diinni jira jedhanis dhugaa tahuu akka malu ibsuun kana dhaabsisuun kan danda'amu rakkoo siyaasaa biyya keessa jiru furuun tokkummaan dhaabbachuun qofa jedhe.
Ijaarsi hidha haaromsaa guddichi amma gara 70% akka gahaa jiru dhiyeenya hojii gaggeessaa olaanaan hidhichaa injiiner Kiflee Horroo himanjii ture.
Itoophiyaan amma sababa sodaa weerara Covid-19'niin labsii yeroo muddamaa jala kan jirtu yoo tahu filannoo biyyaalessaas sababuma kanaan yeroo biraatti dheeressiteetti.
Mariin teeknikaa Itoophiyaa, Masirii fi Sudaan gidduutti taa'ame waliigaltee malee xumurame
Hidhaa waggootaan booda 'bilisa' jedhamuun ija seeraan akkamiin ilaalama?
Tarkiin Fiinlaandi fi Siwidiin NATOtti akka dabalaman deeggarte